सङ्घीयताले मुलुकको विकासमा के प्रभाव पार्छ भन्ने यो वर्षले देखाउछ – मुख्यमन्त्री पोखरेल « Janata Times
सङ्घीयताले मुलुकको विकासमा के प्रभाव पार्छ भन्ने यो वर्षले देखाउछ – मुख्यमन्त्री पोखरेल
सङ्घीयता कुन परिप्रेक्ष्यमा आत्मसात् ग¥यौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई विगतमा सम्बोधन गर्न नसकेको अनुभूतिका आधारमा जनताको ठूलो पङ्तिले एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्प चाहे । त्यही आधारमा सङ्घीयताभित्र नेपाली समाजको विविधताको सम्बोधन गर्ने विकासको मोडल तयार गर्न सकिन्छ भनेर यो व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको हो । केही देशले साना राष्ट्रहरूको बलियो राष्ट्रनिर्माण (कमिङ टुगेडर) का लागि सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छन् । तर, हाम्रो सङ्घीयता त्यस्तो होइन । हामीचाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शासकीय प्रबन्धका दृष्टिकोणले मात्र सङ्घीयता आत्मसात् गरेका हौँ । हाम्रो सङ्घीयताको मूल चरित्र शासकीय प्रबन्ध हो । राष्ट्रको प्रकृतिका आधारमा भन्ने हो भने हामी एउटा राष्ट्रअन्तर्गतकै सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै छौँ । हाम्रो यहाँ पनि बहुराष्ट्रका विषयमा पनि बहस चल्यो तर त्यो वस्तुगत होइन । एक राष्ट्रअन्तर्गतको सङ्घीयताको अभ्यास हो हाम्रो । कसैले बहुराष्ट्रको चर्चा गर्छन्, त्यसले समस्या खडा गरेको छ । संशयवादको सिकार भएर पनि सङ्घीयताको विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन ।
प्रदेश ५ मा स्मार्ट सिटी, विद्युतीय बस सञ्चालनजस्ता महत्वकाङ्क्षी योजना बनाइयो तर काम भएनन्, लुम्बिनीमा चलाउन दिइएका विद्युतीय बस पनि काठमाडौँ पठाइयो भन्ने गुनासो छ नि ?
ठाउँविशेषका विषयमा एककिसिमका आग्रह छन् । हामीले पुरानै ठाउँमा राजधानी बनाउने कि नयाँ ठाउँमा बनाउने ? राजधानी व्यवस्थित हुनुपर्छ तर अर्को ‘काठमाडौँ’ बनाउने होइन । जहाँ बनाए पनि ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा बनाउँछौँ । जनताको कुरा बुझिसकेका छौँ, प्राविधिक पक्षबाट काम भइरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा टुङ्गो लाग्ला । अध्ययन गरेर राम्रो र प्रभावकारी बनाऊँ भनेर ढिला भएको हो । व्यवस्थित सहर बनाउन त अलि समय त लाग्छ । नामका सन्दर्भमा समस्या छैन । हामीकहाँ आवरणको चर्चा धेरै र गुदीको चर्चा कम हुने गर्छ । नाम त जे राखे पनि हुन्छ । धनवीरहरू गरिब छन्, गरिबदासहरू अर्बौंका धनी पनि छन् । नाम राख्दा प्रतिनिधित्व राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । प्रदेश ५ मिनी नेपाल हो । हाम्रो नेपालको ‘एड्भान्स सोसाइटी’ प्रदेश ३ र ४ मा छ भनिन्छ । तर, त्यो हाराहारीका ठाउँ प्रदेश ५ मा छन् । ‘टिपिकल’ समाजका रूपमा कर्णाली र प्रदेश २ लाई चित्रण गरिन्छ, कर्णाली र प्रदेश २ को विशेषता पनि प्रदेश ५ मै छ । सबै ठाउँको विशेषता प्रदेश ५ मा भएकाले मिनी नेपाल हो । प्रदेश ५ बन्नु भनेको नेपाल बन्नु हो । प्रदेश ५ बन्न नसक्दा नेपाल बनाउन अप्ठेरो छ । म यो मान्यता राख्छु । प्रदेशमार्फत नेपाल बनाउने मेरो मिसन हो ।